Njanji dzeMubhedha | KarmanHealthcare.com
musha / Njanji dzeMubhedha
CHIDZIDZO Wellness Chengetedzo Mubhedha Njanji
Iyo Wellness Kuchengetedza Njanji kubva kuKarman ndiyo yakapusa-kushandisa-mhinduro yekudzivirira kwekudonha kubva mumba mako kana mubhedha unogadziriswa. Kamwe yaiswa, Welness Safety Rail inopa rubatsiro rwakasimba mukati-uye-kunze kwemubhedha uye inogona kubatsira kudzivirira njodzi nguva yekudonha. Nechiremera chinokwana mazana mana emalb, njanji uye mubato wekubatsira zvinopa vimbiso inodiwa kune avo vanonetseka nekushomeka kana kudzora kufamba. Iyo Wellness Kuchengetedza Njanji inouya yakajairika ine yakapfava yekubata pamakusheni topper, tambo yekuchengetedza, uye clip kuturika njanji yako padivi pemubhedha kana isiri kushandiswa. Zvidimbu zvekuwanika zviripo zvinosanganisira homwe hombe, chidimbu chekuwedzera, uye tafura inopindirana yetereyi. Iyo Wellness Kuchengetedza Njanji inoshanda kumateti akakwirira e400 "-6" uye inoisa nekukurumidza pane mazhinji echinyakare uye epuratifomu marudzi emubhedha. Iwo epasi zvidimbu zvidimbu zviri 15 "x 19.5" uye kukwirira uye upamhi hwechitima i28.5 "uye 18.5". Kukunda matambudziko ekufamba kunogona kunge kwakaoma, ita kuti imba yako igare yakachengeteka uye ichinakidzwa neWelness Safety Rails kubva kuKarman.
Njanji yemubhedha inobvumidza nyore kupfuudzwa mukati uye kunze kwemubhedha uye inobatsira kudzivirira husiku kudonha
Kuchengetedzwa kumubhedha wemubhedha pamwe nechengetedzo tambo
Bariatric shandisa ine huremu huremu ku400 lbs
Inouya neakasanganisirwa homwe yekurongedza kuchengetedza zvinhu zvinobatsira padyo
Inoisa nekukurumidza uye nyore pane akawanda echinyakare uye epuratifomu mibhedha; isina kuitirwa kushandiswa pamibhedha inogadziriswa
Iyo haina kuitirwa kuti ishandiswe nemibhedha inogadziriswa, mibhedha yevana, mibhedha yemvura, mibhedha inokwenenzverwa, kana mibhedha yemubhedha. Usashandise nemetiresi yakapfava
Zviripo zvekuwedzera zvidimbu zvinosanganisira Yakafukidzwa Tafura yekubatanidza uye Homwe hombe chishongedzo